mVoter 2020 - Apps on Google Play
Disclaimer: The data used in the app is provided by Union Election Comission(https://uec.gov.mm/), although the app is endorsed by the app, please report any data issues to UEC through their contact email
လာမဲ့ ၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲနဲ့ပတျသကျပွီး သိသငျ့သမြှအကုနျကို all-in-one တဈနရောတညျးမှာသိနိုငျဖို့ mVoter ကိုသုံးလိုကျပါ။ ၂၀၁၅ မဲပေးစို့ Hack Challenge မှာ အနိုငျရခဲ့တဲ့ app ဖွဈတဲ့အပွငျ ၂၀၁၅ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲ၊ ၂၀၁၇ ကွားဖွတျရှေးကောကျပှဲ အဆကျအဆကျ တိကမြှနျကနျတဲ့ အခကျြအလကျတှကေို သယျဆောငျလာပေးတဲ့ mVoter ဟာရိုးရှငျးပွီး သုံးရလှယျအောငျ ပွုလုပျထားလို့ မညျသူမဆို အလှယျတကူသုံးနိုငျမှာပါ။ mVoter ကိုသုံးခွငျးဖွငျ့
- ၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲမှာ ပါဝငျတဲ့ ပါတီတှရေဲ့အခကျြအလကျတှေ
- ၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲနဲ့ပတျသကျတဲ့ အမေးမြားတဲ့ မေးခှနျးတှကေို ဖွထေားတယျ
လာမဲ့ ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိသင့်သမျှအကုန်ကို all-in-one တစ်နေရာတည်းမှာသိနိုင်ဖို့ mVoter ကိုသုံးလိုက်ပါ။ ၂၀၁၅ မဲပေးစို့ Hack Challenge မှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ app ဖြစ်တဲ့အပြင် ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၊ ၂၀၁၇ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အဆက်အဆက် တိကျမှန်ကန်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို သယ်ဆောင်လာပေးတဲ့ mVoter ဟာရိုးရှင်းပြီး သုံးရလွယ်အောင် ပြုလုပ်ထားလို့ မည်သူမဆို အလွယ်တကူသုံးနိုင်မှာပါ။ mVoter ကိုသုံးခြင်းဖြင့်
- သင်မဲပေးရမယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို တိတိကျကျ သိနိုင်မယ်
- ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ပါတီတွေရဲ့အချက်အလက်တွေ
- ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမေးများတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဖြေထားတယ်
- ပယ်မဲ၊ ခိုင်လုံမဲ ဥပမာတွေကို ကြည့်နိုင်မယ်
Learn everything about Upcoming 2020 Myanmar General Election in All-In-One App, mVoter 2017. The winning app of the 2015 MaePaySoh(Let's Vote) Hack Challenge, and your trusted source for anything election since 2015 General Election, mVoter 2020, is your one-stop information provider for the general election, featuringasimple and minimalist experience for everyone. With mVoter 2020, voters can
- Learn the process of General Election with Frequently Asked Questions
Really great application Thank You developer.
Better if more personal details is mentioned
- Update party count to 91